Shiinaha Kaydinta Qaboojiyaha / Qaboojiyaha / Qaboojiyaha Muraayadaha Muraayadaha PVC Soo-saare iyo Qeybiye | Gidaar Weyn
Daaqadda fidsan ee 'Plar PVC' waxay si aad ah u jilicsan tahay xitaa 40 ° Celsius oo ka hooseysa eber, taas oo u oggolaanaysa in si fudud dadka, baabuurta iyo alaabtu u dhaafaan ayna si wax ku ool ah uga hortagaan luminta hawada qabow. Xaashida 'Polar PVC' waa xulasho wanaagsan oo loogu talagalay keydinta awoodda sababtoo ah kuma jiraan wadista korantada. Daaha albaabka furan ma laha qayb ficil ah mana soo saaraan qeylo inta lagu jiro adeegga. Qalabka qaboojinta waxaa loogu talagalay waayo-aragnimada suuqa waxaana lagu caddeeyay tijaabooyin madax-bannaan illaa 50% kharashka tamarta, iyadoo gacan ka geysaneysa in gunta tafaariiqda tafaariiqda ay la kulmaan kontaroolada heerkulka sharciga ah.
* Kaydinta qabow
* Albaabbada qaboojiyaha
* Kabadhada Chiller
* Qolka qabow
Xirxirida: Sida caadiga ah waxaan alaabada ku xirxirnay bacaha balaastikada ka dib markii aan isku duubnay 50m, ka dibna waxaan ku xirnay baallooyinka si ay ula kulmaan goobta gaadiidka. Waxaan sidoo kale naqshadeyn karnaa sanduuqyada kartoonka iyo sanaadiiqda aan-fiiqista ee baahida gaarka ah si looga fogaado waxyeellada xagga gaadiidka. Qiyaasta gudaha ee duubista, heerkayagu waa 150mm; waxaan sidoo kale u qaabeyn karnaa baahiyahaaga.
Daahyada xargaha ee darajada 'PVC' ee darajada sare ah ayaa ah ikhtiyaar loogu talagalay keydinta Qabowga, Albaabbada Qaboojiyaha, Deli-Counters, Chiller Cabinets, Qolalka qabow iyo xaaladaha tafaariiqda ee tafaariiqda badankood. Caadi ahaan 50% isdhaaf ah, xadiid bir ah oo gogol dhaaf ah & xargaha xargaha - ama 200 x 2mm ama 300 x 3mm.
Waxaan leenahay laba nooc oo ah daah-furka PVC, oo Smooth ah, iyo Double Ribbed. Daaha albaabka la adeegsaday wuxuu ku tiirsan yahay codsiyada. Fiilooyinka PVC oo leh feeraha kor loo qaaday ee labada dhinacba waa la heli karaa iyadoo la siinayo cimri dherer wanaagsan oo awood u siinaya inay u adkeystaan ​​saameynta soo noqnoqda ee taraafikada culus sida gawaarida forklift.
Waxay kuxirantahay tirada iibsashada macaamiisha, tirada sock ee warshadeena iyo jadwalka wax soo saarka ee amarrada, guud ahaan, amarka waxaa lagu bixin karaa 15 maalmood gudahood.
Hore: Xaashida Silicone Rubber
Xiga: NR Rubber Sheet
Black PCV Strip daahyada
Daahfur PCV Strip daahyada
Qolka Qabow PCV Strip daahyada
Daaha PCV Warshadaha Strip
Daahyada PCV Strip For Ac